Layma's World: အရူးများမဖတ်ရ…ဖတ်သူများမရူးရ…(၂)
Posted by Layma at 7:06 PM
မမလေးရေ... အရူး4နဲ့5လာဖတ်သွားတယ်။ သိုးလေးပြောထားတာ မမေ့နဲ့နော်။
အရူးများမဖတ်ရဆိုတော့၊ နည်းနည်း ရူးချင်ချင် အစကတည်းက ဖြစ်နေတော့ မဖတ်တော့ဘူးနော်။
နှင်းနှင်း…… နောက်တခါလေ့လာရေးက စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ ဖြစ်ဖို့ များတယ်… တကယ်ခေါ်မှာနော်…. ထွက်မပြေးနဲ့ …..။
ကိုရဲကျော်အောင်….. ရူးချင်ချင်ဖြစ်နေသူများ အနည်းငယ်မြည်းစမ်းနိုင်သည် လို့ပြင်ပေးရမလား…..။
အားလုံးထက် တစ်မူးသာတယ် ...
“ကန်တဲ့သူတွေသာပြောင်းသွားတယ်….. လောင်းတဲ့လူတွေက မပြောင်းသွားဘူး…
ဟုတ်တယ်…. ကျွန်တော်လဲ သနားတယ်….. ဘောလုံးကစားသမားတွေကိုရော…. ဘောလုံးပွဲကို ကစားနေကြတဲ့ လူတွေကိုရောပေ့ါ…..။
ဂေါက်သီးလုံးတစ် လုံးကို ကျင်းပေါက်ထဲ မ၀င်ဝင်အောင် ကြိုးစားရင်း .... မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်သွားကြတယ်.....။
ငါအခု သခွတ်ပင်မှာ နတ်သဘင် ညီလာခံတက်ရဦးမယ်...
ဟွန်း....ကိုယ်စောင့်နတ်ကလဲ.... တလွဲကြီးပြောနေတယ်.... သိကြားပြည်မှာ ကသစ်ပင် ပဲရှိတဲ့ဟာကို..... သခွတ်ပင်က အသူရာ ပြည်မှာ ပေါက်တာကြီးကို...
ဟဲ့....အခြေအနေ မကောင်းလို့ နေရာပြောင်းထားတာ.... မသိရင်မပြောနဲ့ .... တခွန်းမှကို ၀င်မပြောနဲ့ .......... ”
ဖတ်တယ် ...... တွေးတယ် ... ရီမိတယ် ... ပြီးတော့ .....
တည်သွားတယ် ... တွေးတယ် ... ပြန်ဖတ်တယ် ... ရီတယ် ... ပြန်တည်သွားတယ် .....
အတွေးတွေ ကောင်းလိုက်တာ ... အရေးတွေလည်း ကောင်းလိုက်တာ .... ဘယ်လိုမျိုးရူးရင် ကောင်းမလဲလို့လည်း စဉ်းစားသွားတယ် ...
လောလောဆယ် စာရူးရူးနေတာတော့ သေချာတယ် ... ကျေးဇူးဗျာ
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ… တော်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဖော်ချက်…။ သုတေသန လုပ်တဲ့ လေးမထက် မှတ်ချက်ရေးတဲ့ ဂျယ်ရီက တမူးသာသွားပြီ…ဟိ…:P
ဖတ်တယ်..တွေးတယ်…ရယ်တယ်….တည်တယ်…မှတ်ချက်ပေးတယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးပါ…စာရူးရူးတယ်ဆိုတော့ တခြားအရူးတွေထက်စာရင် နဲနဲ တော်သေးတာပေါ့…။